ပင်မစာမျက်နှာ OCEANIA ဘောလုံးပုံပြင် ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် စက်တင်ဘာလ 30, 2019
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်ဒါရိုက်တာ Woody"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
ခရစ်ဝုဒ်၏ဘဝအသက်တာနှင့်အထ။ Image ကို Credit: Dailymail, FootballTop နှင့် CambridgeFootball
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ & မိသားစုနောက်ခံ, ပညာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုဇာတ်လမ်းအားမိမိလမ်း, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအချက်အလက်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်မြင့်တက်ကပါဝင်ပတ်သက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူကအမှတ်ပေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမျက်စိနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပါတယ်သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောခရစ်ဝုဒ်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များကိုခရစ္စတိုဖာ Grant ကဝုဒ်ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ဝုဒ်ကသူ့မိခင်ဂျူလီဝုဒ်နှင့်အော့ကလန်, နယူးဇီလန်၏မြောက်အမေရိကကျွန်းတစ်မြို့အတွက်ဖခင်, Grant က Wood ကမှဒီဇင်ဘာလ7၏ 1991th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကဒုတိယကလေးနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံသည်သူ၏မိခင်မှပထမဦးဆုံးသားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ခရစ်ဝုဒ်စစ်ရေးအမြစ်များနှင့်အတူခရစ်ယာန်တစ်ဦးအိမ်နှင့်တစ်ဦးလူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံအဆင့်အတန်းမွေးဖွားခဲ့သည်။ အထက်ပုံကသူ့ granddad လျက်အနိစ္စမရောက်မှီအငြိမ်းစားစစ်ဘက်အရာရှိတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကပဲသူ့ကိုတူသောလည်းတစ်ခုအောင်မြင်သောဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်သူကသူ့အစ်မ Chelsey Wood ကအတူကြီးပြင်းလာတယ်။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
မောင်လေးနဲ့ကြီးတွေအစ်မအိမ်မှာနေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးအစဉ်အမြဲအသီးအသီးကိုအခြားဆန့်ကျင်ဆော့ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်သူအသင်းအားကစားခံစားရန်သင်ယူဘယ်မှာ Onehunga အားကစားမှာမိမိနှမ, join ဖို့သူ့မိဘများကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်။
ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ခရစ်နှင့်သူ၏ညီမနှစ်ဦးစလုံး Wynrs ဟောင်းအားလုံးအဖြူရောင် Wynton Rufer တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအော့ကလန်-based အကယ်ဒမီမှာဘောလုံးပညာရေးလက်ခံရရှိရန်ရက်နေ့တွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ technique ကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ဘောလုံးစမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည် Wyners ခရစ်ဝုဒ်မှာခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
11 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်, အဝုဒ်မိသားစုအော့ကလန်၏ Newzealand မြို့ left နှင့်အရှေ့တောင် Hamilton က၏ကင်းဘရစ်တည်ရှိပြီး 24 ကီလိုမီတာ၏ Waikato ကျေးလက်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မြို့သူ့မိသားစုကို "ကိုပြောင်းရွှေ့ကင်းဘရစ်"အဖြစ်လူသိများသည်"သစ်ပင်များ & ချန်ပီယံလိဂ်၏ The Town"။ အဲဒီမှာနေစဉ်, ခရစ်နှင့်သူ၏ညီမ St ပေါလုရဲ့ Collegiate ကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ခရစ်သူကထွက်ခွာသွားရှိရာကနေသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆက်လက်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုစမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်သန်းနှင့်ဒေသခံ club- ကင်းဘရစ် FC အသင်းနှင့်အတူအငယ်တန်းဘောလုံးကစားရန်မှတ်ပုံတင်ကိုမြင်တော်မူ၏။ အောက်တွင်နည်းနည်းခရစ်နှင့်သူ၏အသင်းဖော်များ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ဝုဒ် (အလယ်တန်း၏ကျန်ကြွင်းရစ်သောအစွန်းရောက်အပေါ်ပုံ) - ကင်းဘရစ် FC အသင်းအကယ်ဒမီနှင့်အတူသူ၏အစောပိုင်းနှစ်များ။
ထိုအဆိုအရ ကင်းဘရစ် FC အသင်းက်ဘ်ဆိုက်ခရစ်ဝုဒ် 14 ခဲ့သည့်အခါသူပြီးသားသူကြီးမားကျယ်ပြနှင့်ခိုင်ခံ့သောခဲ့တာဟာကြီးမားတဲ့ unit- အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအသက်အရွယ်မှာလူငယ်အကြီးတန်းဘောလုံးကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame မှလမ်း
အဲဒီအချိန်တုန်းကကင်းဘရစ် FC အသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Ken Hobern, အ Wood ကမိသားစု၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဟာကလေးငယ်သည်သူ၏ပထမဦးဆုံးစီနီယာအသင်းအသွင်အပြင်ရှိခြင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရန်ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ မင်းသိလား?… ken က Chris Wood ကတိထားတော် $100 သူသည်ရည်မှန်းချက်မယ့်မိနစ်ကွာကသူ့ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုမှမသိတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လျှင်။
ဒေသခံပြိုင်ဘက်မှာစာလုံးပေါင်း Hamilton က Wanderers အောက်ပါရာသီပြီးနောက်ခရစ်ဝုဒ် 2007 အတွက်သူ့ကိုဝယ်ယူတဲ့သူ ASB ပရီးမီးယားကလပ် Waikato FC အသင်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည်ကလပ်ပူးပေါင်းသကဲ့သို့, Wood ကမိမိအလက်မှတ်အဘို့တောင်းပန်သောသူဥရောပတိုက်တွင်သိသာကလပ်တစ်ခုအရေအတွက်အားဖြင့်စောင့်ကြည့်တယ်။ ရုံကလပ်နှင့်အတူ5ဂိမ်းကစားပြီးနောက်, ခရစ်ဝုဒ်အင်ျဂလိကလပ်အနောက် brom အားဖြင့်နှုတ်တယ်။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame မှထလော့
သစ်သားသူပျံအရောင်လွန်ထားတဲ့သူ့အဘို့စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်တဲ့သူနည်းပြရော်ဂျာ Wilkinson ကအနောက် Bromwich Albion ရဲ့အကယ်ဒမီမှအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအကယ်ဒမီခရစ်ဝုဒ်မှာနေစဉ် အနောက် brom ရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီဘက်များအတွက်ဂိုးသွင်းပုံစံ, သူ့အကြီးတန်းအဖွဲ့ဆန္ဒစာရင်းတွင်သူ့ကိုနေရာကသူ၏နည်းပြအတင်းအကျပ်သောလုပ်ရပ်တစ်ခုကြွယ်ဝသောသွေးကြောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ 2009 ခုနှစ်တွင်အများအပြားအနောက် brom ကစားသမားမှဒဏ်ရာ Wood ကတစ်ဦးအံ့အားသင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ brom ဦးပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကမှတက်မခေါ်ပေးအပ်ခံရခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ သူဟာပရီးမီးယားလိဂ်တွင်ကစားရန်အပဉ္စမနယူးဇီလန်ဖြစ်လာဖို့ခုံတန်းရှည်ကိုချွတ်လာ၏။ အင်္ဂလန်မှာနေချိန်တွင်သူကနှိမ့်ချရာသီအားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီ, သူဖြစ်နိုင်သည်တစ်ခုချင်းစီနည်းပြကနေတတျနိုငျသသလောက်စုပ်ယူ, ငွေချေးရွေ့လျားသွားသဖြင့်မိမိအအလုပ်သင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
စာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်အရေးအသား၏အချိန်ရန်, Wood ကလက်ရှိသူအဘို့ကစားချင်ပါတယ်အားလုံးကလပ်အသင်းအတွက် 100 ရည်မှန်းချက်များထက်ပိုမိုမှတ်ပုံတင်လျက်, အင်္ဂလိပ်ကလပ်ဘောလုံးအဘို့အဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်က Burnley အသင်း၏ဒုကပ္ပတိန်လက်ရှိကလပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကြောက်မက်ဖွယ်မိတ်ဖက်အတော်ပင်သူ6ပေ3တိုက်စစ်မှူး အက်ရှလေ Barnes.
ခရစ်ဝုဒ် Fame မှထလော့။ Image ကို Credit: PlanetFootball နှင့် DailyStar
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုဟာသူ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူကအများဆုံး Burnley နှင့် Newzealand ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေက Chris Wood က Girlfriend သို့မဟုတ်ဇနီးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်သူကိုလုံ့လဝိရိကြရမည်ဟုအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းခံရ! အဘယ်သူမျှမကသူ၏ချစ်စရာအသွင်အပြင်သူ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေအချို့တစ် Darling စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သောဖြစ်ရပ်မှန်များငြင်းပယ်ရှိပါသည်။
သို့သော်အောင်မြင်သော Newzealander နောက်ကွယ်မှ, Kirsty Linnett ၏လှပသောလူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရည်းစားရှိနေပါသည်။ ခရစ်ဝုဒ်၏လှပသောရည်းစား Alderley Edge, Cheshire အတွက်ကော်ဖီဆိုင်များတွင်သူမ၏ယောက်ျားနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများဇူလိုင်လ 14 ၏ 2015th နေ့၌ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။
ခရစ်ဝုဒ် Wife- Kirsty Linnett တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ်မှ အုပ်ထိန်းသူ
မင်းသိလား?… ခရစ်ဝုဒ်၏လှပသောရည်းစားကိုလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအမျှသူမအောက်မှာ-23 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကလီဗာပူးလ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့အတွက်ပါဝင်သည်။ အောက်တွင်သူမအနေနဲ့ပြိုင်ဘက်အပေါ်ကြာအဖြစ်, သူမ၏ကလပ်လီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်အတူအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် Kirsty Linnett ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
လီဗာပူးလ်အသင်းအဘို့အရေးယူအတွက် Kirsty Linnett ။ ခရက်ဒစ်မှ အုပ်ထိန်းသူ
ရည်းစားနှင့်ရည်းစားနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုဂုဏ်ယူကြသည်။ Kirsty အဆိုအရ ... '' ကျွန်တော်အဟောင်းများကိုဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ဖို့လေကြောင်းပြောသည့်အခါပြန်ကြည့်ဖို့အကြီးဖြစ်လိမ့်မည် အိပ်မက်,''
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်ချိန်းတွေ့, နှစ်ဦးစလုံးစုံတွဲတို့အတွက်လိုပဲကဘာလဲ: "Linnett နှင့် Wood ကနှစ်ဦးစလုံးအဘို့,ဘောလုံးအစဉ်အမြဲပထမဦးဆုံးလာ"။ သူမသည်စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်, သူတို့ဂိမ်းအပြီးတစ်ခါတစ်ရံရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်ကြကြောင်းဝန်ခံသည်။ ဘောလုံးအိမ်မှာသူတို့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူ standby အပေါ်အမြဲဖြစ်သကဲ့သို့ Linnett နဲ့ Chris နှစ်ဦးစလုံးဟာဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကျော်ငြင်းခုန်ဘူး။
Wood နဲ့ Linnett နှစ်ဦးစလုံးအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်လက်ထပ်ခံရဖို့သေးဖြစ်ကြောင်းအချို့သောပရိတ်သတ်များမှနေဆဲအံ့သြစရာဒါဟာ။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပျော်မွေ့လမ်းဖြင့်စီရင်တော်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလာမယ့်တရားဝင်ခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ဝုဒ်နှင့် Kirsty Linnett- ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးလင်မယား
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ခရစ်ဝုဒ်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိရန်ရယူခြင်းသင်ပြဇာတ်များ၏အစေးကိုချွတ်သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ဘေးဖယ်ဘောလုံး, Wood ကလည်းတူသောထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားအားကစားအောက်ပါအတိုင်း; မြင်းပြိုင်ပွဲ, ရပ်ဂ်ဘီပြည်ထောင်စု, ပုရစ်, ဘေ့စ်ဘောနှင့်နက်ဘောလုံးကစားနည်း။ သူကပစ်ခတ်မှုနှင့်ရောထွေး Doubles တင်းနစ်တွင်ပါဝင်ရန်ချစ်တော်မူ၏။
ဤတွင်အစေးပယ်ခရစ်ဝုဒ်လှုပ်ရှားမှုများတချို့ရှိနေပါတယ်။ Image ကို Credit: တွစ်တာ
ခရစ်ဝုဒ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအပြင်သူလူပေါင်းကောင်းသောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပျော်စရာအဘို့အစဉ်အမြဲအဆင်သင့်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်သူတို့လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာဖြစ်သကဲ့သို့, အလေးအနက်စဉ်းစားဟန်နှင့်အညစ်ရဖို့နည်းနည်းစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
သူ့မိသားစုတ breadwinners ဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်သူသည်ခရစ်ဝုဒ်ရှိသည်ဖို့အတှကျဝမျးသာဖြစ်ပါသည် ဘောလုံးမှဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးကျေးဇူးတင်စကားဆီသို့သူ့မိသားစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုအတု။ အခုတော့သူ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအပိုအချက်အလက် here're ။
ခရစ်ဝုဒ်ဖေ: အနည်းငယ်သာအကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်သူကို Grant က Wood ကခရစ်၏အဘဖြစ်၏။ သူကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလပ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်သော Onehunga အတွက်အတူတကွပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူ့သားနဲ့သမီးကိုအားပေးမှုများအတွက်တန်ဖိုးထားသည်။ သူ၏ဇနီးနှင့်မတူဘဲသူ့အပေါ်၌အနည်းငယ်မီဒီယာလွှမ်းခြုံရှိသေး၏။
ခရစ်ဝုဒ်အမေ: လှပဂျူလီဝုဒ်က Chris '' အမေပါပဲ။ သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်တူမတူဘဲ, သူမကမီဒီယာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မဆိုကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းမထားပါဘူး။ အောက်တွင်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသူတို့က Chris '' granddad ကျင်းပရှိရာ ANZAC နေ့ကတက်ရောက်ခဲ့သည်အဖြစ်သူမ၏သားနဲ့ Chris နှင့်အတူလှပသောဂျူလီတစ်ဦး phot ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံဂျူလီ Wood- ခရစ်ဝုဒ်ရဲ့မိခင်။ Image ကို Credit: တွစ်တာ
ခရစ်ဝုဒ်ညီအစ်မ: အခုဖွင့်သူ့ကိုတူသောဘောလုံးကစားသူက Chris Wood က၏ညီမသူသည် Chelsey အကြောင်းပိုမိုသင်သည်ပြောပြပါရစေ. Chelsey ချီလီအတွက် 20 U2008 အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်းတစ်ခုအောက်မှာ 20s အဖြစ်သူမ၏တိုင်းပြည်, နယူးဇီလန်ကိုယ်စားပြုသည်။ Chelsey လည်းဂျာမနီရှိ 2010 U20 အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုခြင်းဖြင့်ယခုနှစ် 20 အတွက်လက်အောက်တွင်-2008 ကစားသူမ၏အစ်ကိုထက်အဟောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုသည်။
မင်းသိလား?…4၏အသက်အရွယ်မှာ Chelsey သူမ၏အစ်ကိုနှင့်အတူဘောလုံးကစားရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အကယ်ဒမီကစားစတင်မယ့်အချိန်ပဲ။ မိမိအဆင်းလှသောအစ်မအစ်မကိုအောက်တွင်ပုံအဖြစ်4၏အသက်အရွယ်ကနေ 12 မှခရစ်ဝုဒ်အတူတူအသင်းများအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ဝုဒ်အဘိုးအဘှားသူ၏အဘိုးအဘွားအနက်ခရစ်ဝုဒ်နှောင်းပိုင်းတွင်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမေ့လျော့မထားဘူးသောမိမိ granddads တဦးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူကိုအလွန် ချစ်. သူသည်သူ၏ Granddad ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ သတိရ: သူအပေါ်လွန်မတိုင်မီ Wood ကရဲ့ grandad အငြိမ်းစားစစ်သားဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကအပေါ်လွန်မီထွ-စစ်တပ်လူကိုသူတွေ့ဆုံ Wood ကရဲ့ Granddad ။ တွစ်တာမှအကြွေး
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
"ဒါဟာသားရဲတကောင်ရှိခြင်းအရည်အသွေးကိုခဲ့ရဲ့ !! ကားတစ်စီး Dream, ကခစျြ!" သူကသူ့ကား, သူ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့စပိုကောင်းတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်လုပ်ရပ် admires အဖြစ်သူများသည်ခရစ်ဝုဒ်၏စကားခဲ့ကြသည်။
အဘယ်အရာကိုခရစ်ဝုဒ်လူနေမှုပုံစံနဲ့တူလှပါတယ်။ တွစ်တာမှ credit ။
Wood က, ဃများအတွက်ကွင်းပိတ်အစေးများနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအပေါ်လက်တွေ့အကြား eciding ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာမွတျနိုးသောအရာတို့ကိုအပေါ်သူ၏ဘောလုံး Moni ဖြုန်းဖို့ချစ်တော်မူ၏။
ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
မင်းသိလား?… ခရစ်ဝုဒ်အဖြစ်ဝေးအဖြစ်အများဆုံးလေးစားဖွယ်အမည်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နယူးဇီလန်ဘောလုံးစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေ့ဆက်နိုင်အောင်သူသည်နယူးဇီလန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမား '' Association ကတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့လေးစားသည်။
အမျိုးသမီးများနေ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလှုပ်ရှားသူ: သငျသညျတခြားဘာကိုမျှော်လင့်ကြဘူး။ ခရစ်ဝုဒ်၏ညီမနှင့်ဇနီးအားလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများဖြစ်ကြခံရဖို့။ ယဇ်သည်သူ၏ညီမလုပ်နဲ့သူ့ရည်းစား Linnett ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသည့်ရုန်းကန်မှုများ Wood ကအမျိုးသမီးဂိမ်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကျူးလွန်ထောက်ခံသူစေပြီ။ "ဒါဟာဘောလုံးသို့မဟုတ်ဘောလုံးကစားသူတစ်ဦးအစ်မကစားသူတစ်ဦးရည်းစားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်ပါဘူး, အဲဒီအကြောင်းမှန်ရာကိုလုပ်နေရဲ့။ " ခရစ်ဝုဒ် တစ်ချိန်ကဂါးဒီးယန်းသို့ပြောသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ဝုဒ်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ဟယ်ရီ Kewell ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - 12ပြီ ၂၄ ရက်၊